Diiwaanka Dadweynaha ee Skatteverket
Dhammaan dadka deggan Iswiidhan waxay ka diiwaangeshan yihiin hay’adda Skatteverket. Diwaanku waxa weeye diiwaan ay dadweynuhu ku qoran yihiin. Waxaa diiwaanka dadweynaha lagu kaydiyaa warbixinta dadka, sida magaca, aqoonsiga xaaladda qoys ahaaneed.
Haddaba, kolka guri cusub loo guurayo, waxaa loo baahan yahay in cinwaanka cusub laga diiwaangeliyo Skatteverket. Si ay boostadu cinwaan sax ah ugu timaaddo iyo in la bixiyo canshuur sax ah.
Warqadda la buuxinayo kolka la guurayo waxaa laga helayaa bogga Internet-ka ee Skatteverket in guuritaanka la diiwaangeliyaana waa lacag la’aan.
Warqadda la buuxinayo kolka la guurayo waxaa laga daabacanayaa bogga Internet-ka ee Skatteverket: www.skatteverket.se
Soo sheeg cinwaanka cusub
Marka guuritaanka lagu wargeliyo hay’adda Skatteverket waxaa cinwaankaas cusub helaya hay’ado badan. Laakiin waxaa loo baahan yahay in aad adigu la xiriirto dhammaan hay’adaha, ururada iyo shirkadaha si ay u helaan cinwaanka cusub. Waxaana kuwaas ka mid ah dugsiga iyo shirkad aad macmiil ka tahay. Haddii kale waxaa dhici kara in boosto muhiim ah loo diro cinwaan qalad ah. Waxaa dhici kara in xisaabaadka aan la bixin ay daahaan oo lacag xusuusin ah la dulsaaro, amase loo gudbiyo hay’adda hantidoorka Kronofogden. Eeg qaybta ku saabsan xuquuqda macmiisha iyo dhaqaalaha guriga.
Waxaa la codsan kara in dib laguugu soo diro boostada oo cinwaankaaga cusub laguugu soo diro adigoo bixinaya lacag khidmad ah.
Waxaa warbixin dheeraad ah oo ku saabsan dib-u-diridda boostada laga akhrisan karaa boggaan: www.adressandring.se
Warbixintu waxay ku qoran tahay af-Ingiriis.